Mpanamboatra sy mpamatsy EVA - China EVA Factory
Sarimihetsika adhesive miempo EVA mafana miempo ho an'ny kiraro
Ny sarimihetsika mametaka hafanana EVA dia tsy misy fofona, tsy misy tsirony ary tsy misy poizina. Misy polymer miempo kely izay copolymer etiléna-vinyl acetate. Ny lokony dia mavo mavo na fotsy vovoka na granula. Noho ny crystallinity ambany, ny elastika avo lenta ary ny endriny toy ny fingotra, dia misy polyethyle ampy ...
Horonantsary adhesive mafana mamelombelona an'i Eva
W042 dia ravina lakaoly fisehoana fotsy izay an'ny rafitra fitaovana EVA. Miaraka amin'ity fisehoana mahafinaritra sy firafitra manokana ity, ity vokatra ity dia miaina breathablility lehibe. Ho an'ity maodely ity dia manana rindranasa maro izy izay ankatoavin'ny mpanjifa maro. Izy io dia mety amin'ny fifamatorana ...
L043 dia vokatra EVA fitaovana izay mety amin'ny lamination ny microfiber sy EVA slices, lamba, taratasy, sns .. Izy io dia nofinidin'ireo izay te-handanjalanja ny fanodinana sy ny fanoherana ny temprature. Ity maodely ity dia novolavolaina manokana ho an'ny lamba manokana toy ny Oxford clo ...